Fimpima : any Mahajanga ny « Herinandron’ny kabary » | NewsMada
Fimpima : any Mahajanga ny « Herinandron’ny kabary »
Nanomboka tamin’ny herintaona, tontosaina ivelan’Antananarivo ny « Herinandron’ny kabary » fanaon’ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy (Fimpima). Ho an’ity taona ity, hotanterahina any Mahajanga izany ny 7 aogositra ka hatramin’ny 13 aogositra izao. Maro ny fandaharam-potoana nomanina ao anatin’io herinandro io raha ny fanazavan’ Andriamboavonjy Hanitra, filohan’ny foibe Fimpima maneran-tany.
Anisan’izany ny fampirantiana iarahana amin’ireo rantsana, sampana, faritany Fimpima. Takarivam-pialamboy hanehoana ny hakanton’ny hainteny, hira, fanentanana samihafa. Takalo kabary isam-paritra. Sôma amoron-dranomasina ahitana lalao, lomano, tafasiry, sns. Atrikasan’ny fampianarana. Diabe hanehoana ny fitafy mampiavaka ny isam-paritra. Sahobin’ny mpikabary, handraisan’ny sehatra rehetra anjara toy ny hira, dihy, vakodrazana, hainteny, sokela, kabary, sns.
Amin’ny ankapobeny, hizara roa ny hetsika any Mahajanga. Ao ireo hanasana ny olona rehetra, toy ny fampirantiana ireo kolontsaina isam-paritra, ao amin’ny Tranoben’ny kolontsaina, mandritra ny herinandro. Fampisehoana kabary, kilalaon-tsaina. Takalo isam-paritra. Fiofanana samihafa sy lanonam-pamoahana mpikabary. Sahoby bevatan’ny mpikabary, eny amin’ny « Bord », sns.
Ho an’ny mpikabary manokana : Atrikasa isan-tsokajiny, fiofanan’ny mpampianatra,
fivorian’ny komity foibe, hanaovana tatitra ny asa vita sy hanapahana ny tetikasa taona 2017.